के नेकपा एमाले चुनावी गठबन्धन गर्छ ?
काठमाडौं । आसन्न स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर सत्तारुढ दलहरु चुनावी तालमेल गर्न खोजिरहेका छन् । विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यो विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र भने थरीथरीको धारणा छ ।
को बन्ला बुटवल उपमहानगरको मेयर ? एमाले र कांग्रेसबाट १२ जना दौडमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने